Ukukhethwa kweendaba zokuhlela ngoJuni | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Iincwadi, Inoveli, Inoveli emnyama, Uloyiko
NgoJuni, inyanga entsha kunye nokufundwa okutsha okuza kusithatha kwikhefu elilandelayo. Ngezihloko ezahlukeneyo, le yeyam Ukukhethwa kwezihloko ezi-6 yeembali zembali, ezimnyama, eziyimfihlakalo kunye nezoyikisayo kunye nohlaziyo oluyintsomi lwenkwenkwezi yeklasikhi kunye nomfazi oqaqambileyo owayenguHedy Lamarr.
1 Amabala ozuko - uPedro Santamaría
2 Isibhengezo - uRosa Blasco
3 Emva kukaStephen King
4 Amagqirha - uEmanuela Valentina
5 Ezinzulwini zobusuku - uMikel Santiago
6 Umnqweno ongafezekanga-URoberto Lapid
Masimi obuqaqawuli - UPedro Santamaría
UPedro Santamaría uveza inoveli entsha xa eyokugqibela isekhona, Ingxowa yaseRoma. Kusibuyisela emva kwiAntiquity ukuba isixelele elinye ibali elisetiweyo enyakeni 450d. C. IiHuns ze U-Attila boyisile baboyisa kaninzi-ninzi uBukhosi base-Roma baseMpuma, obusele bubaxolele kwaye babanika irhafu.
UFlavio AecioNgokubanzi kwimikhosi yaseNtshona, ucacile ukuba kungekudala iya kuba lithuba labo. Ukongeza, iphondo elityebileyo laseAfrika liwele ezandleni zeVandals, Swabians kunye neBagaudas IHispania kwaye amaGoth amise ubukumkani obuncinci ejikeleze iTououse. Ngaphezulu kwako konke, eRavenna, iphi inkundla yasebukhosini yababuthathaka UValentinian III Yindlwane yamaqhinga nabangcatshi. Ke uAetius uyazi ukuba xa kukho ithuba lokugcina okushiyekileyo eRoma, kuya kufuneka enze isivumelwano neentshaba zakhe zangaphambili, i Iigoths ezenziwe nguTheodored, Ukujongana nemikhosi ka-Attila.
Uqikelelo -Rosa Blasco
URosa Blasco uvela eTeruel waseAlcañiz, nangona esebenza njengogqirha wosapho eTudela, umsebenzi awudibanisa noncwadi. Ubhale Isibhedlele saseProvence y Igazi elingalunganga. Kwaye ngoku uveza eli bali litsha kunye nabalinganiswa abaphambili, i-forensic I-Simonetta brey noMkomishinala UDario Ferrer, Ngubani oya kuthi aphande amatyala abanye wabulala oogqirha eMenorca.
Después -UStephen King
Inokuba yintoni le mihla ngaphandle kwencwadi ye UStephen King? Ke ngoku iya kwesi sihloko seshumi elinanye leenkwenkwezi UJamie conklin, okuphela komntwana womama ongenaqabane, ofuna nje ukuba nobuntwana obuqhelekileyo. Kodwa kuyabonakala ukuba wazalwa ene-a amandla angaphezu kwendalo oko kukuvumela ukuba ubone ukuba akukho mntu unako kwaye ufumanise ukuba yintoni engaziwayo lihlabathi liphela. Ngokusebenzisana nomhloli ovela kwiSebe lamaPolisa laseNew York, onyanzela ukuba uphephe uhlaselo lwamva nje lokubulala egrogrisa ngokuhlasela nokuba kungcwatywa, uJamie kungafuneka ahlawule ixabiso elinzima ngaloo mandla.
Amaxhwele -Umanuela Valentina
Sikwanayo le Thriller isethwe kumantla e-Italiya. Sikwi-2019 kwidolophana encinci esezintabeni eqokelelana ukuzolila ukulahleka kwentombazana enamathambo afunyanwa ehlathini, kwiminyaka engamashumi amabini anesibini emva kokuduka kwayo. Ifikelela kuye USara romani, ugqirha we-oncologist ophumeleleyo, owayengazange abuye ukusukela ebuntwaneni bakhe kwaye ngoku uphinda wadibana nexesha elidlulileyo awasinda kulo. Kodwa emva koko iyaphela Kufowune enye intombazana Rebecca, ngubani oyindlalifa yokugqibela kwinkcubeko yamandulo yamagqirha. Kwaye uSara kuya kufuneka ashiye ingqondo yakhe yohlalutyo ngasemva ukuze afumanise ukuba kwenzeka ntoni.
Ezinzulwini zobusuku -UMikel Santiago
UMikel Santiago buyela ku I-Illumbe, Idolophu yelizwe laseBasque apho wayesele ebeke inoveli yakhe yangaphambili, Ixoki. Ngoku kusibuyisela emva kwiminyaka yee-XNUMX, kubusuku bekonsathi yedwala apho intombazana yanyamalalayo. Obo busuku yayikuphela kwebhendi kunye neqela labahlobo abasuka UDiego Letamendia, enye Iinkwenkwezi zerokhu Ukwalela ukuba ngubani, emva koko, washiya umsebenzi ophumeleleyo wedwa. Amapolisa akazange akwazi ukufumanisa ukuba kwenzeke ntoni I-Lorea, intombazana elahlekileyo kunye nentombazana kaDiego, eyayishiye ikonsathi ngokukhawuleza okukhulu.
Sele ikho ngoku, kwaye sisazi ukuba elinye lamalungu ebhendi lisweleka umlilo ongaqhelekanga, UDiego uzakuthatha isigqibo sokubuyela e-Illumbe. Ukudibana kwakhona nabahlobo bakudala kuya kuba nzima kwaye, ukongeza, ngoku kurhanelwa ukuba lo mlilo mhlawumbi awenzekanga ngengozi.
Umnqweno ongafezekanga -Roberto Lapid
Umbhali waseArgentina uRoberto Lapid uveza le noveli isekwe kwiziganeko zokwenyani ngobomi be UHedy Lamarr, ayisiyiyo kuphela umdlali weqonga kunye nomdlali bhanyabhanya, kodwa ngumfazi omhle kwaye okrelekrele, ophambili kwimbali yekhulu lama-XNUMX. Ukongeza kwikhondo lakhe lomsebenzi wefilimu, wafunda kwezobunjineli kwaye wasungula kunye nelungelo elilodwa lomenzi wechiza a inkqubo yonxibelelwano kwii-torpedoes ezinamandla kunye nokuqinisekisa unxibelelwano phakathi kwamahlakani ngexesha lemfazwe. Kukule teknoloji ukuba le nkqubo siyisebenzisayo namhlanje kwiifowuni eziphathwayo, iWi-Fi, iBluetooth kunye neGPS isekwe.
Ke sinayo UFriedrich Mandl, Ostriya oselula othabathela kuye umzi-mveliso wezixhobo ezonakalisiweyo zikayise kwaye kwisithuba nje seminyaka elishumi uyakwazi ukwenza enye yezona ndyebo zinkulu zaseYurophu. Kodwa ndibona umdlali weqonga UHedwig Kiesler kwimuvi uthandana naye kwaye bayatshata. Nangona kunjalo, xa ubudlelwane buwohloka ngenxa yomona nokungathembeki, umvalela kwinqaba yakhe eSalzburg.
Hedy uya kukwazi ukubaleka kwaye baya kubaleka kulo lonke elaseYurophu. Kukwi-liner yolwandle ebheke eNew York apho adibana khona ULouis B. Meyer, Umongameli weMetro Goldwyn Meyer, omqeshayo kwangoko aze amenze uHedy Lamarr.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Ukukhethwa kweendaba zokuhlela ngoJuni